पतञ्जली टेलिभिजनको स्टुडियो नबनेपछि विभागले कारबाही नगर्ने ! « News24 : Premium News Channel
पतञ्जली टेलिभिजनको स्टुडियो नबनेपछि विभागले कारबाही नगर्ने !
काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रसारण अनुमतिपत्र नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मण्डिखाटारमा शुक्रबार उद्घाटन गरेको ‘पतञ्जलि नेपाल’ र ‘आस्था’ टेलिभिजनको स्टुडियो नभेटेपछि कारबाही प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ ।
विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईका अनुसार पतञ्जलि टेलिभिजनको स्टुडियो नै नबनेको र टेलिभिजन खोल्न कुनै तयारी नै नगरेको पाइएकोले कारबाही गर्ने आधार देखिएन ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एकसाथ टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका थिए ।
नेपालमा विदेशी टेलिभिजन खोल्न कुनै नियम नभएको भन्दै यसविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि विभागले पनि त्यसलाई चासो साथ नियालेको थियो ।
तर, विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले टेलिभिजनले अहिलेसम्म स्टुडियो नै तयार नभएको फेला पारिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अनुमतिपत्रविना प्रसारण उपकरण, सामग्रीहरु जडान गरेको भेटिए जफत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
अनुसन्धान समितिले पतञ्जलिको कार्यालयमा छापा मार्दा भवन मात्रै उद्घाटन गरेर ‘टेलिभिजन’ उद्घाटन भनिएको भनेको छ । यसरी टेलिभिजन छैन तर, भवनमात्रै भएपछि कारबाही गर्न विभाग पछि हटेको हो ।